कसरी सर्छ आँखाबाट कोरोना भाइरस ? – Jagaran Nepal
कसरी सर्छ आँखाबाट कोरोना भाइरस ?
अनुसन्धानकर्ताले रुघाखोकीलगायत स्वासप्रश्वास सम्बन्धी छिटाबाट कोरोना भाइरस सर्ने बताएका छन् । नयाँ अध्ययनले एसीई–२ प्रोटिनद्धारा आँखामार्फत पनि यो भाइरस सर्न सक्ने देखाएको छ ।
केही दिनअघि अर्को एक अध्ययनले कोभिड–१९ ले मानिसको कन्जङ्क्टिभामा संक्रमण गर्नसक्ने संभावना एक सय गुणा बढी रहेको जनाएको थियो । कन्जङक्टिभा एक झिल्ली हो, जसले आईबल (आँखाको नानी) र आईलिडको भित्रि सतहलाई कभर गर्छ ।